Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha Hirshabeele oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha Hirshabeele oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyagoona kadib halkaasi kulamo la qaatay mas’uuliyin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir.
Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) iyo mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta wafdigaasi kusoo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Socdaalka madaxweyne Cali Cosoble ee Muqdisho ayaa yimid kadib markii isaga iyo xubnihii la socday ay marti qaad ka heleen maamulka gobolka Banaadir, si ay ukala war-qaataan islamarkaana ay wax isla meel dhigaan arrimaha ka dhaxeeya labada dhinac.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimacaale (Madaale) oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay aad ugu faraxsan yihiin inay magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyaan madaxweynaha cusub ee Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble iyo xubno ka socda Aqalka Sare ee matalaya gobolada Sh/dhexe iyo Hiiraan.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulanka ay maanta wada yeesheen mas’uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ay uga wada hadleen sidii loogu raadin lahaa xuquuqda gobolka Banaadir iyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, uljeedka kale ee wafdigaan uu ku yimid magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inuu yahay mid ay maamulka gobolka Banaadir kala hadli doonaan sidii loo dhisi lahaa wadada isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho.